Dating Online Safety Advice Tips
kufambidzana Online kunogona kuva ngozi ruzivo kupfuura kufambidzana chinyakare. It anokupai rakasiyana kutsanangurwa sarudzo uye unogona kuramba chinhambwe kusvikira wagadzirira kusangana.
Kana awaisambova vakaedza pamberi kana uri kushushikana chero nyaya ungave wakanzwa, pano pane mazano mashomanana kuti wauri kudanana paIndaneti zvakachengeteka:
Kuvimba zvaisazogona dzenyu. Kana chinhu asingadi kunzwa zvakanaka, nei kutora mukana. Disengage akanyatsodengezerwa, kana izvi zvikasashanda, chete disengage.
Ramba chaiye. Kuva vakatendeseka unogona paaisika kwako Profile, iwe angasada kutsauswa saka regai kutsausa munhu. Ndicho uyewo zvakaoma chaizvo kuti kuedzesera uri 6'2″ kana muri 5'6″!
Post pikicha, asi iva nechokwadi chokuti haukwanise kuziva mhuri yako, shamwari, musha kana motokari mairi.
Ramba kudzora. Usakanda mapfumo pasi mashoko chero munhu pasina nguva kana mumhanyi pachavo mashoko pasina kuziva chaizvoizvo ani muri nekupa.
Dzivirira Zvauri. Shandisa nzvimbo akafanana needu kuti anovanda email address uye kane mashoko.
Dzivisa chero kungotaura mari zvakare nyore. Hapana chikonzero nei uchifanira nokusingaperi buritsa ruzivo kuwana paIndaneti.
Regai vakakwezvwa zvikumbiro rubatsiro rwemari, kana mumwe munhu akakukumbira mari kunyange kana iwe makavakwa nokuvimbana ushamwari navo, ivo vanenge zvechokwadi Scammer.
Regai anomanikidzirwa kupinda kupa chero mashoko kana mapikicha kuti murege kuda uye kunyanya kupinda musangano usati wagadzirira.
Kana uri chokwadi, kumbira zvichangobva mufananidzo ani uchitaura.
Funga zvaunoona nyora dzako Profile uye kana nokungotaura. Zvine kubudisa zvakarurama matauriro uye chinangwa?
Chenjerera munhu anozivisa rusingaperi kwavo kwamuri, kunyanya kana iwe wambosangana navo.
Paunenge wagadzirira kusangana, tarisa wedu-munhu kufambidzana kuchengeteka zano pazasi
In-Munhu Dating Safety Advice
Dating kuburikidza paIndaneti basa yakadai seyedu chinhu yakachengeteka chiitiko asi nhokwe kufara zviri dzimwe nguva nyore kukanganwa kuti irambe kuti nzira.
Unofunga kuti akasangana paIndaneti musi hope dzako kana zvichida unongoda kuziva asi unofanira vakabvuma kusangana. Unogona kuva musoja dater kana zvichida kudzoka nezvokudanana pashure ukama yakapera asi pano mimwe mashoko zano nokukurumidza kuti musangano kukwira:
Usaora kusundwa kupinda zuva uye zvechokwadi musapa pamusoro wako pachako kuonana mashoko kutoti muri wakasununguka kuita kudaro. Usambopa wako musha kana hofisi kero kana muri zvachose chivimbo chokuti unoziva uye unogona kuvimba zuva rako.
Dzivisa munhu anotaurisa nezvepabonde kana mari usati kunyange wakavachingamidza. Chenjerera munhu anozivisa rusingaperi rudo nemiwo nyore.
Kana ukasangana nokuda misi ivavo vokutanga shoma, sarudza kwazvakarerekera pachena nzvimbo iri nyore kwauri zvose uye ari mukati maonero uye kunzwa kure nevamwe vanhu.
Udza mumwe munhu kuti unovimba ani zvauri kusangana, kwaunoenda uye nguva ipi aunoda kuti ikoko. Kana urongwa yako ichichinja musakanganwa kupa MASHOKO EZVAKAITIKA.
Rongai nemunhu kuti 'wotarisa’ dzimwe nguva uye vane coded nzira kuvaudza kuti kuenda, kunyanya kana uchida rubatsiro.
Kuvimba zvaisazogona dzenyu, kana uchifunga chinhu chakaipa, unofanira nomutsa kuita kuzvipembedza uye kusiya.
Usamborega kuvimba musi wako kutakurirwa kuti kana panzvimbo yenyu kumusangano, kunyanya ronga rwendo kumusha kana unofanira kusiya risingatarisirwi. Itai mberi nhamba batsira kana uchida mumwe.
Kana kuenda kumba pamwe chete mberi, edza uchakandirwa kure okupedzisira asi kanenge tisadaro zuva rako chaiwo kwaunogara.
Ngwarira nedoro kuitira kuti urambe njere dzako pamusoro pako. Kana uchifunga zvokudya zvako kana zvokunwa yave kutambwa naro zvino regai kurupedza chose.
Ivai nechokwadi kuti imi mune zvizere mhosva pafoni chete kwemaminitsi zvakakwana.
Kuremekedza kuti zuva raako zvakafanana kunetsa uye regai kuzvimanikidza muvira kuita chinhu vasina achinyatsoita.